ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း “Create Winning Mindset NOW” ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည်
Submitted by zwintun on Tue, 07/07/2015 - 13:03
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၃) ရက် (တနင်္လာနေ့) နံနက် (၉း၃၀ မှ ၁၂း၃၀) နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ MICT Park ၊ အခန်း (၂၀၅) တွင် Your Winning Ways Australia မှ Program Director ဖြစ်သူ Mr. PHILIP J WIN မှ “Create Winning Mindset NOW” ခေါင်းစဉ် နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးဟောပြောမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ဟောပြောပွဲ၌ အောက်ပါ အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
1. What do you really want in your life?
2. Install successful people's habits.
3. Set your goals and become reality you want.
4. Installing your new confidence and beaCHAMPION
5. Destroy limiting belief and becomeaWINNER
6.7Secrets of Winning Mindset and beaSTAR.
ဟောပြောပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ တန်ဖိုးထားနိုင်၍ အောင်မြင်လိုသော စိတ်ဓါတ်များ မွေးမြူပြီး လုပ်ငန်းခွင်နှင့် နေ့စဉ်ဘဝတွင် အောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ရေးကို တိုးတက် ကောင်းမွန် စေမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ဟောပြောပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို (အခမဲ့) တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ရုံးခန်း၊ အဆောင် (၉)၊ မြေညီထပ်၊ MICT Park၊ ဖုန်း − ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉−၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။
Read more about ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း “Create Winning Mindset NOW” ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ MCPA Day နှင့် Career Fair ကျင်းပမည်
Submitted by zwintun on Thu, 06/25/2015 - 11:46
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ IT လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ နှင့် IT Industry ရှိ ကုမ္ပဏီများကို ချိတ်ဆက်ပေးရန် ရည်ရွယ်၍ MCPA Day ကို ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၄) ရက်တွင် ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
MCPA Day နေ့တွင် IT နည်းပညာကို အသုံးပြုနေသော ကုမ္ပဏီများမှ မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းများကို ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ သိရှိစေရန် မိမိတို့ကုမ္ပဏီအတွက် လိုအပ်လျှက်ရှိသော ICT လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များကို ခေါ်ယူခန့်ထားနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ Career Fair ကျင်းပရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထား ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးရှိ IT အသုံးပြု၍ အောင်မြင်ထင်ရှားသော ကုမ္ပဏီကြီး များနှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၏ နိုးကြားတက်ကြွပြီး ထူးချွန်ထက်မြက်သောလူငယ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များကို ဆုံစည်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပသော Career Fair သို့ ပါဝင်ဆင်နွှဲရန် စိတ်ဝင်စားသော အဖွဲ့အစည်း များသည် အဆိုပြုလွှာကို မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်းသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ လည်းကောင်း၊ အီးမေးလ် – office@mcpamyanmar.org , yrcpaoffice@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်၍ လည်းကောင်း ပါဝင်လိုသည့်ကုမ္ပဏီအမည်၊ Logo နှင့် Registration Fees – (၁၀၀,၀၀၀) ကျပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ရုံးခန်းတွင် ( ၁၇- ၇- ၂၀၁၅) နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လာရောက် ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ MICT Park, အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ်၊ ဖုန်း-၀၁ − ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သည်။
Read more about ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ MCPA Day နှင့် Career Fair ကျင်းပမည်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲ Certified Network Associate Exam ကျင်းပခဲ့
Submitted by zwintun on Sun, 06/21/2015 - 12:49
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲ Certified Network Associate Exam ကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁) ရက် (တနဂင်္နွေနေ့) နံနက် (၉းဝဝ မှ ၁၂းဝဝ) နာရီ အထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးတွင်လည်းကောင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းနှင့် မကွေးတိုင်းကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းတို့တွင်လည်းကောင်း တပြိုင်နက် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစာမေးပွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ ဖြေဆိုသူ စုစုပေါင်း (၂၄) ဦး၊ မန္တလေးတိုင်းမှ ဖြေဆိုသူ (၃) ဦးနှင့် မကွေးတိုင်းမှ ဖြေဆိုသူ (၅) ဦး စုစုပေါင်းဖြေဆိုသူ (၃၂) ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲများသည် အိုင်တီပညာရှင်များအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလိုသော ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများ၊ အသင်းဝင်များအရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ဦးတည်စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲများ ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ် ဇွန်လနှင့် ဒီဇင်ဘာလများတွင် စစ်ဆေးလျှက်ရှိပါသည်။
Read more about မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲ Certified Network Associate Exam ကျင်းပခဲ့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း “How to write the business specification and technical specification relative to ERP system” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်။
Submitted by zwintun on Tue, 05/26/2015 - 14:10
သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၆) ရက် (စနေနေ့) နေ့လယ် (၂း၀၀ မှ ၅း၀၀) နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ MICT Park အခန်း(၂၀၅) တွင် United State of America မှ ERP Expert ဖြစ်သူ ဦးကျော်စွာမှ“ How to write the business specification and technical specification relative to ERP system” နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး ပြောကြားပေးမည် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ ကွန်ပျူတာနည်းပညာကို လေ့လာ နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို (အခမဲ့) တက်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ်၊ MICT Park၊ ဖုန်း−၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉−၇၃၀၈၈၃၀၀၊ အီးမေးလ်− yrcpaoffice@gmail.com သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း နိုင်ပါသည်။
(မှတ်ချက်- ဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်မည့်သူများအနေဖြင့် (၄−၆−၂၀၁၅) နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ အသင်းရုံးသို့ အကြောင်းပြန်ကြား ပေးစေလိုပါသည်။)
Read more about ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း “How to write the business specification and technical specification relative to ERP system” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည်။
Information Technology Professional Examination Council မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် (၇) နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPEC Exam Results
Submitted by zwintun on Sat, 05/23/2015 - 23:42
Read more about Information Technology Professional Examination Council မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် (၇) နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPEC Exam Results
Submitted by zwintun on Wed, 05/13/2015 - 22:08
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အသိအမှတ်ပြု Network စာမေးပွဲကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းနှင့် အသင်းခွဲများရှိရာ မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း၊ မကွေးတိုင်းတို့တွင် တပြိုင်နက် ကျင်းပစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၏ စာမေးပွဲများမှာ အိုင်တီပညာရှင်များအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလိုသော ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၊ အသင်းဝင်များအတွက် အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြုခံနိုင်ရေးအတွက် ဦးတည်စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲများဖြစ်သည်။
အဆိုပါစာမေးပွဲသည် Professional နယ်ပါယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်ရန်အတွက် အဓိကလိုအပ်သော အသိပညာများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ဦးတည်စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲဖြစ်သည်နှင့်အညီ စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများသည် ပညာရှင်နယ်ပယ်တွင် စတင် လုပ်ကိုင်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
	စာမေးပွဲအမျိုးအစား	- Network Associate Examination (NA)
	စာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့	-	၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁) ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)
	စာမေးပွဲပြုလုပ်မည့်အချိန်	-	နံနက် (၉း၀၀) နာရီမှ နေ့လယ် (၁၂း၀၀) နာရီအထိ
	နောက်ဆုံးစာရင်းပေးရမည့်နေ့	-	၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၈) ရက် (ကြာသပတေးနေ့)
	စာမေးပွဲကြေး	-	၂၀၀၀၀ ကျပ်
(MCPA အသင်းဝင်များအား 50% Discount ရရှိပါမည်။)
	ကျင်းပမည့်နေရာ	-	Room 205, MICT Park, လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၊ ရန်ကုန်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ်၊ MICT Park လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၆၅၂၂၇၆ / ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Read more about မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲကျင်းပမည်
Information Technology Professional Examination Council မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် (၇) နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPEC Exam စာမေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့
Submitted by zwintun on Mon, 05/11/2015 - 12:23
Information Technology Professional Examination Council မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် (၇) နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPEC Exam စာမေးပွဲကို ၁၀-၅-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် မန္တလေးတိုင်း တို့တွင် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့ရာ Information Technology Passport Examination (IP Exam) တွင် (၁၆) ဦး၊ Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE Exam) တွင် (၃၇) ဦး အသီးသီး ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။
Read more about Information Technology Professional Examination Council မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် (၇) နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPEC Exam စာမေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့
Read more about “Wireless Network Essentials Course (WNE)” အမှတ်စဉ် (၁၃) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
“Learning Java FX” သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Submitted by zwintun on Sat, 05/09/2015 - 20:42
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှကြီးမှူး၍ Java နည်းပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားသော မြန်မာလူငယ်များအတွက် Java FX Course သင်တန်းတစ်ခုကို ၂၀၁၅ ခုနစ် မေလ (၃၀) ရက်မှ ဇွန်လ (၇) ရက်အထိ (စနေ၊ တနင်္ဂနွေ) (၂) ပါတ်တိတိ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Java နည်းပညာကို စိတ်ဝင်စားပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလိုသူများ နှင့် ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုလိုသူများ အထူးတက်ရောက်သင့်ပါသည်။
Day	(1)	Title	: About Layouts	(30.5.2015)
Day	(2)	Title	: Playing with Controls	(31.5.2015)
Day	(3)	Title	: Attractive GUI with Animations	(6.6.2015)
Day	(4)	Title	: Writing A Project (7.6.2015)
(1)	Java Programming Basic Level
(2)	Class and Instance
(3)	Controls flow Statements
Just knowing level, I will teach again if you need.
Target  Scratch up Rich Client GUI Application from ZERO by the power of JavaFX.
သင်တန်းကာလ - မေလ ၃၀ ရက် မှ ဇွန်လ ၇ ရက်အထိ (စနေ၊တနင်္ဂနွေ)
သင်တန်းအချိန် - နံနက် ၉း၃၀ မှ နေ့လယ် ၁း၀၀ နာရီ အထိ
သင်တန်းကြေး - ၁၅,၀၀၀ိ/ (တစ်သောင်းငါးထောင်ကျပ်)
MCPA Member (50%)	- ၇၅,၀၀ိ/ (ခုနှစ်ထောင့်ငါးရာကျပ်)
သင်တန်းသားဦးရေ - (၂၅) ဦး
သင်တန်းနေရာ - အဆောင် (၉)၊ မြေညီထပ် MCPA Lab Room, MICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်။
သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် မေလ (၂၉) ရက်နေ့ညနေ (၃) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ MCPA ရုံးခန်းသို့ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ရုံးခန်း၊ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ်၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Read more about “Learning Java FX” သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
“About Java SE8”သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Submitted by zwintun on Thu, 04/23/2015 - 17:31
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှကြီးမှူး၍ Java နည်းပညာရပ်များကိုစိတ်ဝင်စားသော မြန်မာလူငယ်များအတွက် Java SE8 Course သင်တန်းတစ်ခုကို၂၀၁၅ခုနှစ် ဧပြီလ၂၅နှင့်၂၆ရက် များတွင် (၂) ရက်တိတိ ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
Section (1)	Title	: Overview about Java SE 8	(25.4.2015)
Time	: 9:30 - 10:00
Teacher	: Koji Ishida
Translator	: Zaw Min Lwin
Section (2)	Title	: Lambda Expression & Functional Programming
Teacher	: KyawKyawLwin
Section (3)	Title	: Stream API	(26.4.2015)
Time	: 09:30 - 12:30
Section (4)	Title	: Free Questions
Time	: 12:30 - 01:00
သင်တန်းကာလ - ဧပြီလ၂၅ရက် မှ ဧပြီလ၂၆ရက်အထိ (စနေ၊တနင်္ဂနွေ)
သင်တန်းအချိန် - နံနက် ၉း၃၀ နာရီ မှ နေ့လယ် ၀၁း၀၀ နာရီ အထိ
သင်တန်းကြေး - ၈,၀၀၀ိ/ (ရှစ်ထောင်ကျပ်တိတိ)
MCPA Member (50%)	- ၄,၀၀၀ိ/ (လေးထောင်ကျပ်)
သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့်ဧပြီလ (၂၄) ရက်နေ့ညနေ (၃) နာရီနောက်ဆုံးထား၍ MCPA ရုံးခန်းသို့လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊အဆောင်(၉)၊မြေညီထပ်၊ဖုန်းနံပါတ် -၆၅၂၂၇၆၊၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀သို့စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
မှတ်ချက်၊ သင်တန်းတက်ရောက်မည့်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့ Laptops များယူဆောင်လာပါရန်။
Read more about “About Java SE8”သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်